ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဌာန တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းမည် . ၀န်ကြီးဌာနပေါင်း ၂၅ ခုအထိ ရှိလာတော့မည်ဖြစ် | The Ladies
Home » ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဌာန တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းမည် . ၀န်ကြီးဌာနပေါင်း ၂၅ ခုအထိ ရှိလာတော့မည်ဖြစ်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဌာန အသစ်တခု တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်း မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးက နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်၏ လူမှုစီးပွားဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂ၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာကပေးအပ် သည့် ကူညီထောက်ပံ့မှုများသည် နိုင်ငံတော်၏ မူဝါဒစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ပိုမိုထိရောက်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ အတွက်လည်းကောင်း ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏ အရေးပါ သည့် အခန်းကဏ္ဍကို ထိရောက်စွာ မြှင့်တင်ရာတွင် နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများ၏ အကျိုးစီးပွားအလို့ဌာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိ ခိုက်မှုမရှိစေသည့်၊ တာဝန်ယူမှု ရှိသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကို ဖြည့်စွက်ဖွဲ့စည်းရန် လိုအပ်သည့် အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၀၂ ပါ ပြဌာန်းချက်နှင့်အညီ ခွင့်ပြုပေးနိုင်ပါရန် ရှင်းလင်းတင်ပြအပ်ကြောင်း ဦးထွန်းထွန်းဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ တင်ပြထားသည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနတစ်ခု တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းရန် ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ဆွေးနွေးခြင်းအစီစဉ်ကို နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက က ကြေညာခဲ့သည်။
အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် ၀န်ကြီးဌာန ၂၁ ခု နှင့် စတင်ဖွဲ့စည်း ခဲ့သော်လည်း အစိုးရသက်တမ်းအတွင်း ၀န်ကြီးဌာန အချို့ ထပ်မံတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ ယခု ၀န်ကြီးဌာန အသစ်ကို ခွင့်ပြုမည် ဆိုပါက ၀န်ကြီးဌာနပေါင်း ၂၅ ခုအထိရှိလာတော့မည်ဖြစ်သည်။ အစိုးရသက်တမ်းအတွင်း တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည့် ၀န်ကြီးဌာန များမှာ အတိုင်ပင်ခံရုံး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန တို့ဖြစ်သည်။